नेपालमा ३ कारणले राजनीति कमाई खाने भाँडो भयो, के के हुन् त कारणहरु ! « Surya Khabar
नेपालमा ३ कारणले राजनीति कमाई खाने भाँडो भयो, के के हुन् त कारणहरु !
चैत्र ३, २०७३
आफ्नु फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ ।
(१) हाम्रो जस्तो गरीव मुलुकमा १६४ राजनैतिक दलहरू निर्वाचन अयोगको मा दर्ता भएको देखिन्छ। अझै पनि वजारमा किराना पसल खुले झैं राजनैतिक दलहरू खुल्ने क्रम जारी छ। किनभने नेपालमा राजनीति आराम संग वसेर कमाई खाने ‘गोरख धन्दा’को रूपमा अत्यन्त फस्टाएको छ। सांसद लगाएत सवै राजनैतिक नियुक्तिका पदहरू विक्रीमा राखिएको छ। नैतिकता, इमान्दारीता, लगनशीलता तथा राष्ट्र र जनताको सेवा कोरा आदर्शमा सीमित रहेको छ। मानव वेच विखन त भएकै छ – अव राष्ट्र विक्री गर्ने प्रतिस्पर्धा चलि रहेको छ।
(२) नेपालमा सवै भन्दा वढी भ्रष्ट्राचार राजनैतिक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको तथ्य Transparency Internationalको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीति सेवा होइन, व्यवसायमा परिवर्तन भयो। राजनीतिमा जमिन्दारी प्रथा हावी भयो। केही योग्य, अनुभवी र क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा पीडित भएर हालै दल परित्याग गरेका छन्। कोही विगतमा भएको हत्त्या, हिंसाको अभियोगमा अन्तराष्ट्रिय अदालतवाट हुन सक्ने कारवाहीवाट जोगिन दल खोलेका छन्। कोही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र श्रोतको आडमा देशलाई विखण्डन गर्ने कुत्सित मनशायले शसस्त्र संघर्षको नारा दिएर अमुक गिरोह र संगठनको आवरण भित्र आतंकवादलाई प्रश्रय दिंदै ध्वंसात्मक गतिविधिमा सकृय छन् । केही क्षेत्रीय दल र नेताहरू छिमेकी राष्ट्रको निर्देशानुसार उनीहरूले प्रस्ताव गरे जस्तो प्रदेश स्वीकार नगरे अर्को देश वनाउने घुर्की, धम्की र हदै सम्मको bargaining गर्दै छन्। एउटा कहाली लाग्दो सत्य !
(३) यसको उपचार भनेको नेपाल जस्तो सानो, गरीव मुलुकमा वढीमा प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्र समेत राष्ट्रिय स्तरमा वढीमा ७ वटा राजनैतिक दलहरू हुनु पर्दछ। यसको निमित्त राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न ‘थ्रेस होल्ड’ कुल खसेको मतको न्यूनतम १० प्रतिसत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रिय सभामा मात्र सीमित हुनु पर्दछ। देश बिखण्डन गर्ने कुत्सित उद्देश्यवाट प्रेरित गिरोह र संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाईनु पर्दछ र यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा गिरोहलाई देशको संविधान अनुसार अदालतवाट कसुर ठहर भए हदै सम्मको सजाय हुनु पर्दछ।